के मेकरले सारालाई संझिएनन् ? « Mazzako Online
के मेकरले सारालाई संझिएनन् ?
नेपाली फिल्ममा लगानी गर्नेहरु अब तातिन थालेका छन् । १० महिना ठप्प भएको फिल्म क्षेत्र चलमलाउन थालेको छ । यसले नेपाली फिल्ममा काम गर्नेहरुका लागि उत्साहित बनाएको छ । म्यूजिक भिडियोमा काम गरेरै भएपनि आफूलाई व्यस्त बनाएका कलाकारहरु अब फिल्ममा पनि व्यस्त हुन थालेका छन् । यसले सिनेमा क्षेत्रमा सुखद सन्देश दिइरहेको छ ।
फिल्ममा काम गर्ने कलाकारलाई अफरको पनि ओइरो छ । कोही कलाकारको हातमा फिल्म नै फिल्म छ, कसैको हातमा सुनसान छ । गुञ्जन फिल्ममा काम गरेर बसेकी अभिनेत्री सारा सिर्पालीको लागि पनि यस्तै छ । उनलाई नयाँ फिल्मको अफर नै आएको छैन । साराले ३ वटा फिल्म लगातार हिट दिन नसकेपछि उनलाई निर्माताले पत्याएनन् ।
साराको सुन्दरताको मात्र चर्चा भयो । तर, उनको कामको पनि चर्चा भएन । यसैले पनि आजको दिनमा सारासँग फिल्मको अफर गएको सुनिएको छैन । सिनेमा क्षेत्रमा व्यस्त रहेका केही कलाकारको हातमा फिल्मको ताती छ । कसैको हातमा फिल्म नै छैन । के साराले नयाँ फिल्म खेल्नका लागि गुञ्जनको व्यापार नै पर्खिनुपर्ने हो र ?